Ngaba Ukrelekrele loMthengi? | Martech Zone
Ngaba Ukrelekrele loMthengi?
NgoMgqibelo, ngoJuni 1, 2013 NgoLwesine, Meyi 30, 2013 Douglas Karr
Umhlobo, uPatrick Gibbons, kunye neqela lakhe Ulwazi ngeWalker zibeke ndawonye Iingxelo ezili-10 malunga nobukrelekrele bamakhasimende kunye nendawo enikezelweyo, Yiba Ngumthengi Okrelekrele, apho unokwabelana ngamabali ngendlela umthengi okrelekrele ungu.
Iminyaka sifunde ubudlelwane bamakhasimende kwaye ngoku, ngakumbi kunakuqala, umthengi uyaqhubeka nokutshintsha. Bafuna kakhulu kwaye balindele ukuba ubazi kwaye uhambise iimveliso kunye neenkonzo ngendlela elungiselelwe iimfuno kunye neemfuno zabo. Olunye ukhetho luyafumaneka. Ukutshintsha kulula. Iinkampani ongazange uzibone njengabantu abakhuphisana nabo ngoku kunokuba sesona sisongelo sakho.
I-Walker igxile kugcino lwabathengi kunye neendlela zokukhula, kusetyenziswa ukuqikelela kubahlalutyi, Ukusika ubuchwephesha, kunye nokudibana neengcali ukuhambisa iziphumo.
Athini amaphiko esiCwangciso sakho seNtengiso?